सरसफाइको तीन सामान्य बानी, जुन बच्चाका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ !! | सुदुरपश्चिम खबर
सरसफाइको तीन सामान्य बानी, जुन बच्चाका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ !!
यदि तपाईंले आफ्नो बच्चालाई शौचालयको सफाइसम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिसक्नुभएको छैन भने शौचालय प्रयोग गरेपछि कसरी फ्लस गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन नभुल्नुहोस् । उनीहरूलाई दिसापिसाब पछि स्वयं नुहाउन सिकाउनुपर्छ, विशेषगरी गुप्तांगको सफाइको बारेमा उनीहरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ । शौचालय सफाइसँगै शौचालय सफा गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ । ट्वाइलेट पेपरबाट शौचालयको सिट सफा गर्नु, डस्टबिनमा प्रयोग गरिएको टिस्यु राख्नु र त्यसपछि आफ्नो हात साबुन वा हात धुने र खुट्टा सफा गर्ने सही तरिका सिकाउनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । (अनलाइनखबर बाट सभार)
आलुबखडा खानुका ८ ठूला फाइदाहरु !!
यस दिशामा नराख्नुहोस् कुचो, निम्त्याउन सक्छ घरमा बर्बादी !!